Ankoatra ny fametrahana fanontaniana amin'ny fotoana bebe kokoa ara-boajanahary sy ny toe-javatra voajanahary kokoa, ny teknolojia vaovao ihany koa ny mamela antsika mba hanova ny endriky ny fanontaniana. Ny ankamaroan'ny fanontaniana fanadihadiana mihidy, izay namaly misafidy avy amin'ny safidy napetraka nosoratan'ny mpikaroka. Tena dingana izay malaza iray fanadihadiana fikarohana antso "fanaovana teny amin'ny olona am-bavany.", Ohatra, indro misy mihidy fanadihadiana fanontaniana:
"Io no fanontaniana manaraka momba ny asa. Ve ianao, azafady jereo ity karatra, ary lazao amiko izay zavatra ao amin'ny lisitra ity ianao, dia tena kokoa amin'ny asa? "
Tsy misy mampidi-doza ny ho voaroaka;
Miasa ora dia fohy, maro ireo fotoana malalaka;
Vintana ho an'ny fandrosoan'ny;
Ny asa dia zava-dehibe, ary manome ny fahatsapana ny nahavita zavatra.
Ary eto no nanontany io fanontaniana io ao amin'ny misokatra amin'ny endrika:
Na dia roa ireo fanontaniana miseho tena toy izany koa, ny fanadihadiana fanandramana amin'ny Howard Schuman sy Stanley Presser (1979) nanambara fa afaka mamokatra hafa mihitsy vokatra: Efa ho 60% ny misokatra vokatra latsaka ivelan'ny sokajy ao amin'ny mihidy valiny (Sary 3.7).
Sary 3.7: Vokatra avy amin'ny Schuman and Presser (1979) . Ireo valinteny dia tena samy hafa arakaraka ny na ny fanontaniana dia nanontany in mikatona na misokatra endrika.
Na dia misokatra sy mihidy fanontaniana dia afaka manolotra ny tena vaovao ary samy hafa be mpitia tany am-piandohan ny fanadihadiana fikarohana, mihidy fanontaniana tonga mba hanjaka any an-tsaha. Io fanapahana io dia tsy noho ny fanontaniana mihidy no voaporofo hanome fandrefesana tsara kokoa, fa izany dia satria mora kokoa ny mampiasa; ny dingan'ny Coding misokatra-tapitra fanontaniana dia sarotra sy lafo. Ny miala amin'ny fanontaniana misokatra dia Mampalahelo satria mazava ny vaovao ny mpikaroka fa tsy nahalala mialoha ny fotoana izay mety ho sarobidy indrindra.
Misy fikarohana nataoko tamin'i Karen Levy, dia niezaka hamorona vaovao fanadihadiana karazana fanontaniana izay Mitambatra ny tsara indrindra mampiavaka na misokatra ary nikatona fanontaniana (Salganik and Levy 2015) . Izany hoe, manampy ny mpikaroka mba hianatra fanazavana vaovao toy ny tamin'ny fanontaniana misokatra, ary mahavokatra mora ny hamakafaka angon-drakitra toy ny eo amin'ny mihidy fanontaniana. Aingam-panahy avy amin'ny aterineto rafitra mpampiasa entin'ny-Niteraka votoaty, izay Wikipedia dia Ohatra, isika hoe ny rafitra misy Wiki fanadihadiana. Amin'ny combing ny toetra mampiavaka ny Wikipedia sy ny nentim-paharazana fanadihadiana, dia manantena ny mamorona fomba vaovao ny fametrahana fanontaniana.
Ny fanangonana antontan'isa dingana ao amin'ny Wiki fanadihadiana, ary mampiseho an'izany ny tetikasa no nataony tamin'ny New York City biraon'ny ben'ny tanàna mba mampiditra mponina 'hevitra ho PlaNYC 2030, New York ny citywide maharitra drafitra. Mba hanombohana ny dingana, ny ben'ny tanàna ny Biraon'ny niteraka ny lisitry ny 25 hevitra mifototra amin'ny ny teo aloha fitoriana (ohatra, "Takina rehetra lehibe trano hanao ny sasany angovo fahombiazana upgrades," "Ampianaro ny ankizy momba ny maitso olana izay tafiditra ao am-pianarana fandaharam-pianarana"). Ny fampiasana ireo 25 hevitra hoe "voa," ny ben'ny tanàna ny Biraon'ny nanontany ny fanontaniana hoe "izay manao araka ny hevitrao no tsara kokoa hevitra ho an'ny famoronana ny maitso, lehibe New York City?" Namaly ireo naseho tamin'ny roa ny hevitra (ohatra, "Open schoolyards manerana ny tanàna ho playgrounds-bahoaka "sy ny" hazo lasibatra fitomboana plantings amin'ny manodidina avo asma tahan'ny "), ary nangataka mba hifidy eo aminy (Sary 3.8). Rehefa avy mifidy, namaly avy hatrany aseho amin'ny hafa tsapaka voafantina mpivady ny hevitra. Namaly dia afaka manohy mandray anjara vaovao mikasika ny tiany, raha mbola tiany amin'ny alalan'ny latsa-bato, na misafidy na "Tsy afaka manapa-kevitra." Crucially, na oviana na fotoana, namaly dia afaka handray anjara ny heviny manokana, izay-eo am-piandrasana ny fankatoavana ben'ny tanàna ny Office-lasa anisan'ny amin'ny farihy hevitra mba hatolotra ho an'ny hafa. Noho izany, ny fanontaniana izay mpandray anjara mandray dia sady misokatra ary niara-nikatona.
Sary 3.8: Interface ny wiki fanadihadiana (Salganik and Levy 2015) .
Ny biraon'ny ben'ny tanàna nanomboka ny wiki fanadihadiana tamin'ny Oktobra 2010 izay mitohy amin'ireo vondrom-piarahamonina andianà fivoriana mba hahazoana mponina feedback. Nandritra ny efa-bolana, 1.436 namaly nandray anjara 31.893 464 valinteny sy hevi-baovao. Manakiana, 8 ny ambony 10 scoring hevitra dia nakarin'ny mpandray anjara, fa tsy ampahany amin'ny napetraka ny voa hevitra avy amin'ny ben'ny tanàna ny Biraon'ny. Ary, rehefa mamaritra eo amin'ny taratasy, izany no fomba maro Wiki fanadihadiana. Amin'ny teny hafa, amin'ny alalan'ny fanehoana ny vaovao misokatra vaovao, ny mpikaroka dia afaka mianatra zavatra izay efa Nalahelo mampiasa fomba mihidy kokoa ny mangataka.